Camping Fire Starter, Maa ụlọikwuu Cookware Set, N'èzí Tent - Sicily
Akpa eji eme ihe na azu paaki
Iru eru Sọpụrụ
Maa ụlọikwuu tableware
Kenkwucha akpa na azu paaki
Guzobe na 2006, Shenzhen Sicily Technology Co., Ltd. bụ onye na-emepụta ngwa ngwa nke ọtụtụ lanarị na ngwaahịa ịgba ụlọikwuu. Anyị malitere na ọkụ Starter na 2016, ma anyị nwere ọtụtụ ihe ugbu a, gụnyere ọkụ Starter, lanarị gia kit, maa ụlọikwuu tent, azu paaki na maa ụlọikwuu cookware set wdg.
Dị ka ndị na-emepụta ihe, anyị na-achọpụta teknụzụ ọhụrụ kachasị mma nke nwere ike melite ogo ngwaahịa anyị ma na-agbaso ụkpụrụ. Anyị na-enyekwa OEM / ODM ọrụ iji zute ihe dị iche iche onye ahịa chọrọ.
Companylọ ọrụ anyị ji ndị ahịa ya na ndị ọrụ ya akpọrọ ihe. N'ime afọ mmụta, anyị achọtala afọ ojuju nke ndị ọrụ anyị ịbụ otu n'ime ndị isi na-eme ka afọ ojuju ndị ahịa na nyocha ndị ka mma. Ndị ọrụ obi ụtọ enyerela anyị aka ịmalite ọnọdụ siri ike n'ahịa ma wuo ụlọ ọrụ a maara nke ọma maka ọrụ ndị ahịa na onyinye ngwaahịa.
Anyị bụ ndị ndú nke maa ụlọikwuu suvival ngwaahịa, anyị 90% ngwaahịa na-ontop n'ire nke Amazon, ebay, na anyị bụ ndị ọma na OEM na ODM imewe ka kwa ahịa na-arịọ. Afọ 16 exported ahụmahụ, 12 afọ factory ahụmahụ.
Mpi ego, ọ dịghị mmadụ (nke a bụ otú anyị si azọpụta gị ego gị)
Entaa ntị ahịa ọrụ (ọkachamara na-eme ka ihe niile anyị na nkwa)
Kemgbe afọ 2006 (ihe karịrị afọ 15 mmepụta na ahụmịhe ahịa)
OEM / ODM usoro (anyị na-eme ka echiche gị mezuo!)
Nkwenye dị mma (iji ezigbo ihe na ogo dị elu)
Mbupu ngwa ngwa (ụfọdụ ngwaahịa dị na ngwaahịa, ọtụtụ usoro lọjistik dị)
Mock na ọrụ foto n'efu (anyị nwere ọkachamara mmebe foto)
Mgbe-sales ọrụ (Akwụkwọ ikike maka àgwà)
PRODUCT ngosi ngosi Center
Igwe anaghị agba nchara maa ụlọikwuu Cookware Nịm na Wood stovu
Portable, igwe anaghị agba nchara, Nchekwa na NON-egbu egbu
Ngwọta (mee artwork)
Ihe nlele (Kwenye ogo)
Kwenye iji (nkwupụta PO)
Nkwụnye ego (30% nkwụnye ego)
PP sample (foto ma ọ bụ zipu ezigbo sample)
Mass Production (n'oge)
Nkwupụta QC (foto gwụchara ma nyochaa)
Akwụkwọ ọnụahịa zuru ezu (ego zuru ezu)
njikere iji ụgbọ mmiri
Elinyefe na mgbe emechara
Ngwaọrụ (site na ikuku ma ọ bụ n'oké osimiri)
PRODUCT CEMTOMIZATION CENTER
Nwere ike ịkwanye ụdị ọ bụla masịrị gị, ma ọ bụ ị nwere ike ịhazi oyi ọ bụla
AKWKWỌ NDAL D V N’AKA
SITE ndị ahịa
Kedu ihe kpatara ọnụọgụ ahịa nke ngwaahịa ji eduga? Anyị nwere ike ịbụ onye ndú nke maa ụlọikwuu na ngwaahịa. Anyị nwere ike ịhụ ihe ndị ahịa anyị kwuru site na mba niile. Enwere m olileanya na anyị nwere ike inyere gị aka ịme nhọrọ na ịmụtakwu banyere ha.
Ahịa Nyocha nke ngwaahịa
Children Camping Playhouse Pop Up N'èzí entlọikwuu ...
3 na 1 Ime ụlọ / N'èzí Playhouse Pop Up Play Ten ...
Maa ụlọikwuu tent 5/7 Onye Ezinaụlọ Tent Double Laye ...
Maa ụlọikwuu tent 2/4 Onye Family tent abụọ ugboro abụọ na ...
2/4 Onye Pop Up entlọikwuu Family Maa ụlọikwuu Tent Port ...
N'èzí ọkachamara maa ụlọikwuu waterproof windpro ...
Maa ụlọikwuu Tent 2/4 Onye Ezinụlọ Outlọikwuu N'èzí wat ...
Maa ụlọikwuu PET Emergencylọikwuu Emergency tube Tlọikwuu
55L Camping Hiking azu paaki Molle Rucksack Wate ...
Men backpacks Large ikike agha kenkwucha ...
Military kenkwucha paaki Large Army 3 Day Ass ...
Kenkwucha MOLLE Mwakpo Pack, kenkwucha paaki ...
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị
Nwere ike ịkpọtụrụ anyị ebe a
Starter Magnesium oku, Inflatable ụlọ Tlọikwuu, Vlanahụ Fire Starter, Na-adịgide Adị n'doorlọikwuu, Gear Mberede Mberede, Xtm ụlọ Top tent,